सी प्रमाणित प्रमाणपत्र मिसिन qf28y-6x250 - Bambeocnc
मोडेल संख्या: QF28Y-6x250
रेटेड पावर:4किलोवाट
वजन: 665 किलो
नाम: CE प्रमाणित कृत्रिम काटन गर्ने कटाई QF28Y-6x250
फिक्स्ड काटन कोण:90 डिग्री
ब्लेड लम्बाइ 250mm
पाठक को अधिकतम मोटाई:6मिमी
अधिकतम लिपि कोण: 250mm
कार्य तालिका तालिका: 900 * 800mm
कार्य तालिका उचाइ: 1050mm
मोटर रोटेशन: 1440r / मिनेट
अधिकतम दबाव: 15 एमपी
1. सम्पूर्ण रूप देखि यूरोपीय डिजाइन, सुव्यवस्थित लगन, मोनोबलक, वेल्डेड स्टील फ्रेम को विकिरण पल को लागि कठोर र ST44 A1 सामाग्री संग उच्च तनसिल।
2. हाम्रो कुना नचालकहरू अन्य पाना मेटल उपकरणबाट टाढा रहेका कुराहरू सेट गर्दछ त्यहाँ हाम्रो पेटेंट ब्लेड अन्तरिक्ष समायोजन हो जुन अपरेटरले सञ्चालकद्वारा आवश्यक कुनै समायोजन बिना विभिन्न मोटाई काट्न अनुमति दिन्छ। यसले हाम्रो ब्लेड अब लामो समयसम्म अनुमति दिन्छ र हामीलाई एक राम्रो burr मुक्त कट दिन्छ।
3. हाम्रो मिसिनहरूले नकारात्मक स्थितिमा साथै सकारात्मक स्थितिमा ब्लेडको साथ कता। तपाईं कुन कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ आधारमा आधारित रहनु भएको आधारमा, पूरा भाग मेसिनबाट हटाइएको छ (सबैभन्दा राम्रो छ) वा ड्रप टुक्रा (उत्तम छ)। नकारात्मक कट समाप्त भाग मा कम विरूपण को लागि अनुमति दिन्छ। पातलो धातुलाई नकारात्मक काटिएको क्लैंप्स तल छ त्यहाँ कुनै पनि आंदोलन छैन। सकारात्मक काटनले पानालाई बन्द गर्नबाट रोक्न चाहानुहुन्छ कोठाको त्रुटिको लागि अनुमति दिन्छ।
4. स्टक गाइडहरूले ढोकामा ढोका ढोका खोलिएको छ जसले हल्का अधिक सुरक्षित डाइरेक्टरी सेटिङलाई अनुमति दिन्छ, जसले हाम्रो मेशिन अधिक सटीकता र दोहोर्याउने क्षमतालाई अनुमति दिन्छ।
5. कदरिंग हेड उद्योग मा सबै भन्दा अधिक कठोर छ किनकी हामी एक पांच बिन्दु निश्चित हेड मा कार्य गर्दछौं। एक स्थिर कताई हेड जीवन ब्लेड गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ, र मेशिनको जीवन भारी प्लेट हुँदा।
1. प्रतिस्पर्धी मूल्य: यो तपाईंको बजेट र उत्तम बिक्रि व्यवसाय राम्रोसँग भेट्न सक्दछ।
2. OEM स्वीकृत: हामी तपाईंको अनुरोध डिजाईन उत्पादन गर्न सक्छौं।
3. राम्रो सेवा: हामी ग्राहकहरूलाई साथीहरूको रुपमा व्यवहार गर्दछौं।
4. राम्रो गुणस्तर: हाम्रो सख्त गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली छ। बजारमा राम्रो प्रतिष्ठा।
फास्ट र डिलिवरी: हाम्रो फर्वार्डर (लामो अनुबंध) बाट ठूलो छूट छ।
गुणस्तर र सेवा: Bambeocnc मा, हाम्रो # 1 प्राथमिकताले हाम्रा क्लाइन्टहरू उत्कृष्ट गुणस्तरका उत्पादनहरू र उत्कृष्ट ग्राहक सेवासँग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
द्रुत नेतृत्व समय: हामी द्रुत मोड-वरदान उपलब्ध गराउन समर्पित छौं र तपाईंको सँधै अन्तिम अन्तिम म्याच पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न कठिन छ
नगद मूल्यहरू: हामी लगातार हाम्रो उत्पादन लागत घटाउने तरिकाहरू पत्ता लगाउन प्रयास गर्छौं, र तपाइँलाई बचत गर्न सकिरहेको छ!
ब्रान्ड जागरूकता: कुनै पनि बलियो ब्रान्ड को लक्ष्य एक जागरूकता स्तर हासिल गर्दछ जुन गुणवत्ता र मूल्य को सबै संभावित संभावित ग्राहकहरु लाई विचार गर्दछ।
विशेष अफरहरू: हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक किनारा कायम राख्न, हामी लगातार हाम्रो सर्वोत्तम-प्रेस ब्रेकमा विशेष प्रस्तावहरू चलाइरहेछौं, उपकरण सामानहरू र डिजाईन सेवाहरू बिर्सिरहेका छौं। हाम्रो बिक्री शब्दलाई सम्पर्क गर्नुहोस् कि हामी कसरी धेरै पैसा बचत गर्न मद्दत गर्दछौं।